फलो अप : प्रशासकीय अधिकृत लम्साल असफल भए कि बनाए ? भित्री रहस्य !::अनुसन्धान अनलाइन डटकम
कोरोना महामारी भइरहेको समयमा जनस्तरमा काम गर्नु पर्ने समय प्रशासकीय अधिकृत परिर्वतन गर्न ब्यस्त देखिन्छ मेचीनगर नगरपालिका ।
कारोना महामारीले अरु तिर जस्तै मेचीनगरलाई पनि छोडेको छैन् । खुल्ल सिमा भएको पूर्वी नाकामा रहेको यो नगर मा अझै आगोको झिल्का झै कोरोना सल्किरहेको अवस्था छ । यहाँ स्थानीय सामन्य ब्यतिm देखि नगर प्रमुख सम्म यसको सक्रमणमा परेका छन ।
नगर प्रमुख बिमल आचार्य यति बेला सिलिगुढीमा कोरोना जिते पनि अन्य समन्यका बिच उपचारमा रहेका थिए । यता नगर भित्र अर्कै खेल सुरु भया । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को नयाँ जिम्मेवारी समाल्न माइ नगरपालिका इलाम बाट दिनानाथ लम्साल मेचीनगर आए ।
उनी आएको केहीँ दिनमै कोरोना संक्रमणमा परे । नगरपालिका भित्र आफ्नो कार्यभार समालेको केहीँ हप्तामै उनी संक्रमण भएपछि उपचार तर्फ लागे । यस बिचमा उनले काम गर्दै जादा सुरुवात कै अवस्थामा नगरपालिका भित्रका केहीँ बेथिति देखे । जहाँ हिजो बाटै कर्मचारी तन्त्र हावी रहेको नगर भित्र अहिले नेकपा का जनप्रतिनिधीहरु बढी छन ।
सुरुकै अवस्था बाट लम्साल प्रति असन्तुष्ट रहेका केहीं कर्मचारीहरु हिजोकै अवस्थामा आफ्नो हैकम जमाउँन नपाउने भयौं भन्ने चिन्तामा थिए । औलामा गन्न सकिने कर्मचारीका स्वार्थ पूर्ण मागहरु प्रशासकीय अधिकृतलाई नपचेको स्रोत बताउँछ ।
उता राजनैतिक दल(नेकपा) समेत लम्साल प्रशासकीय अधिकृत प्रति चित्त नबुझाइरहेको अवस्थामा देखिन्थ्यो । यसै मौकामा कोराना संक्रमणमा परेकै बेला उनलाई एक महिना समेत नपुग्दै सरुवा गराउँन नगरकै राजनैतिक दलका केहीँ नेताको हात रहेको स्रोतको दावी छ । उनी सरुवा भइ मोरङको रतुवा माई नगरपालिका पुगे । एक महिना नपुग्दै सरुवा गरिएका लम्सालको ठाउँमा त्यही नगरपालिकामा रहेका खेमराज ओझालाइ ल्याएको छ ।
लामो समय गौरादह नगरपालिकामा बसेका ओझा पटक पटक बिबादमा आएका थिए । उनी त्यहाँ हुदा ल्यापटप खरिद देखी सडक बत्ती जडान लगायको बिषयमा बिबादमा थिए । त्यस लगात्यै रतुवा माइ पुगेका ओझा एक महिनाको बिचमा मेचीनगर आउनु राजनैतिक दलको ठूलै हात रहेको बताइन्छ ।
यता नगरपालिका भित्र पटक पटक प्रशासकीय अधिकृत परिर्वतन गर्नु गलत भएको भन्दै वडाध्यक्ष हरुले ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन ।